Item Nha. MS-GX9-RGB
Ruvara kuchinja 9 inch Jeep wrangler jl rgb yakatungamira halo mwenje, inouya ne100w 6500lm yakakwirira danda, 30w 1000lm yakadzika danda uye 22w DRL chena halo. Inokodzera 2018+ Jeep Wrangler jl, DOT SAE Emark-9 yakatenderwa.
Iyi ndiyo yedu yazvino rgb yakatungamira misoro ye Jeep wrangler JL 2018+. Mwenje yedu yemwenje yakagadzirirwa kusavhara guruva, ngura uye isina mvura. Super inopenya yakatungamira halo mwenje ye Jeep Wrangler jl, uya neH4 yekubatanidza uye H13 adapta. Iyo patent dhizaini naMorsun Technology, inokodzera Jeep Wrangler JL 2018+ isina mabhureki anodikanwa. Dhizaini yakasarudzika, isina UV, isina simba, kuchengetedza simba uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza, isina mvura, isina guruva, inorwisa kuputika. Yakareba, yakareba yehupenyu kweanopfuura maawa mazana mazana mashanu.
Specification pamusoro Jeep Wrangler JL RGB Misoro
divi 9 inch yakatungamira mwenje
Hombe Yakakwira 100W 6500LM
Beam Low 30W 3000LM
Zvimiro zve9 inch RGB Halo Mwenje ye Jeep Wrangler JL
9 INCH JL HEADLIGHTS - Yakakosha dhizaini inokodzera Jeep JL (Kwete yeJK) 2018 2019, kutsiva kwakakwana kwe Jeep JL mavambo ekutanga.
YAKADZIDZISWA JL HEADLights - Yakajeka kupfuura JL yekutanga marambi kana mamwe akafanana marambi, 12000LM Yakakwira Beam, 6000LM Yakadzika danda re9 Inch LED mwenje, yakapinza-yakatemwa-yakatemwa mutsara ine yepamusoro mwenje kuburitsa inovimbisa KUTI isapofumadze maziso evamwe vamwe ichipa yakajeka uye yakatambanuka chiono.
Yakagadzirwa nePC dzimba uye polycarbonate lens, simba rakakura uye isina huremu. Rustproof uye inovhundutsa. Dzimba dzakasimbiswa kwazvo, Isina mvura IP68, iyo Hupenyu-span inosvika ku100000hrs. Inoita mushe uye inopa yakanakisa kutyaira ruzivo murenje, smoggy ekunze kana kunaya kwemhute.
PaOEM JL mwenje pane yekugadzirisa sikuruu, unogona kuimonera mumabhureki matatu aripo kugadzirisa mwenje mwenje.
Kupenya kwakakwirira maLED anoshandiswa kuwana pasi simba rekushandisa uye zvirinani zvisina mvura uye isina guruva.
Inoshandisa dhizaini yesainzi inochengetedza zvakatipoteredza ichiona kupenya uye kudzikisa kushandiswa kwesimba.